Ciudad Colladeed oo ka taagan Magalada Guriceel – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Ciudad Colladeed oo ka taagan Magalada Guriceel
Wararka ka imaanaya Magaalada Guriceel ayaa sheegaya in saaka magaaladaasi laga dareemayo xiisad ka dhalatay qaad Shalay lagu gubay Saldhiga Booliska Guriceel.
Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku soo dhigay qaadkan oo si aan sharci ahayn uu magaalada ku soo geliyay nin uu dhalay Gudoomiyihii Dhaqanka ee Beesha Cayr/Habargidir, Allaha u naxariistee Nabadoon Cartan Sheekhdoon.
Arrinta xiisadda keentay ayaa ah in Taliyaha Sadhiga Booliska Guriceel, Daahir Faarax Axmed uu sii daayay nin kaloo ay isku reer yihiin oo qaad soo geliyay Guriceel, halka uu soo qabtay qaadkii kale ee ninkaasi uu lahaa.
Magaalada Guriceel iyo guud ahaanba magaalooyinka kale ee Gobolada Koonfurta iyo illaa Waqooyi Bari Somaliya ayaa qaadka looga mamnuucay amar ka soo baxay Dowladda Federaalka, si looga hortaggo faafitaanka cudursidaha Coronavirus.
Hase ahaatee tallaabadan cid gooni ah lagu beegsaday ayuu u horseeday Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud kaga noqday Taliye Daahir Faarax.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in laga cabsi qabo in dhacdadan ay isku dhac beeleed ka abuurto Magaalada Guriceel, inkastoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo.
Taliye Daahir ayaa ku heyb ah Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, waxaana xilkan loo soo magacaabay, mudada uu xilka ku magacaaban yahay Wasiir Sabriye.
Tani waxay ku soo aadaysa, xilli uu horey muran uga taagnaa, iyadoo beesha Wasiir Sabriye ay isku wada qaadatay Taliyaha Saldhiga Booliska iyo Taliyaha Nabad Suggida ee Guriceel, tiiyoo loo aaneynayo inuu sababteedu lahaa Wasiirka
Previous Guddoomiyaha gobolka Sanaag ayaa maamulayaasha dugsiyada waxbarasho ee degmada Badhan
Next Qofkii 2-aad oo Ka Shaqeynayay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo Laga Helay Coronavirus